E-ဘောင်ချာ (com.mmblur) APK | AAPKS
Version 2.84 - com.mmblur
Last updated: Tue, 19 May 2020 6:44:14 UTC
Download Version 2.84 (69)
App Developer E-ဘောင်ချာ မိသားစု
App Package com.mmblur.apk
Download E-ဘောင်ချာ 2.84 APK
E-ဘောင်ချာ is mmblur,business,e-​ဘောင်​ချာ, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated5by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit E-ဘောင်ချာ မိသားစု website who developed it. com.mmblur.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.0.x and higher Android devices. The Latest Version of 2.84 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 128+ times on store. You can also download com.mmblur APK and run it with the popular Android Emulators.
တန်ဖိုးကြီး စက်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်နေစရာမလိုပဲ E-ဘောင်ချာနဲ့ဆို ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းရှိရုံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို စီးတီးမက်လို ခေတ်မှီ ဆိုင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
- ဈေးရောင်းတဲ့အခါ တွက်စက်မလိုပဲ E-ဘောင်ချာ သုံးပြီး ဖုန်းပေါ်ကနေ ကျသင့်ငွေတွက်လို့ရတာမျိုး
-ဈေးဝယ်သူတွေကို ပေးဖို့ ဘောင်ချာတွေကိုလည်း ဝါယာလက် ပရင်တာသုံးပြီး ချက်ချင်း ဘောင်ချာစာရွက်ထုတ်လို့ရတာမျိုး
- အရေးကြီးတဲ့ အရောင်းစာရင်းတွေ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတွေ ဘောင်ချာဟောင်းစာရင်းတွေကို ဖုန်းပေါ်ကနေ စာရင်းမှတ်လို့ရတော့ ဝန်ထမ်းတွေလဲ ဈေးရောင်းတဲ့အခါ မမှားတော့ဘူးပေါ့
-ဘောင်ချာပရင်တာနဲ့ ချိတ်ထားလို့ရတော့ ဘောင်ချာစာအုပ်လုပ်ဖို့ ပုံနှိပ်တိုက်ကို တကူးတက သွားနေစရာမလိုဘူး။
-ဘောင်ချာစာရွက်ထဲမှာ ဆိုင်လိပ်စာတို့ ဖုန်းနံပါတ် ပြင်ချင်တာရှိရင်လည်း E-ဘောင်ချာနဲ့ဆိုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ အခုချက်ချင်း ပြင်လို့ရတာမျိုး
- ဘောင်ချာပရင်တာနဲ့ ချက်ချင်း ဘောင်ချာ စာရွက် ထုတ်လို့ ရနေတော့ ဘောင်ချာတွေထိုင် ရေးနေရတာထက်ပိုပြီး အလုပ်တွင်ကျယ်တာမျိုး၏
E-ဘောင်ချာဆိုတာ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ထားတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ဈေးရောင်းစနစ်ပါ။ အရင်ကလို စာရွက်နဲ့ ဘောပင်သုံးပြီး ဘောင်ချာဖြတ်နေရတာကနေ E-ဘောင်ချာကို သုံးပြီး City-Mart ကလို ဘောင်ချာ အမိုက်စားလေးတွေ ထုတ်တာပါ။
များသောအားဖြင့် ဒီဂျစ်တယ် ဈေးရောင်းစနစ်တစ်ခုကို စသုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်လိုက်ရပါပြီ။ ကျနော်တို့ E-ဘောင်ချာကတော့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဆောင်းရာသီ ပရိုမိုးရှင်း ရက် ၃၀ အခမဲ့ ပေးထားပါတယ်။ E-ဘောင်ချာကို ဖုန်းထဲမှာ အင်တာနက်ကနေ ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး စမ်းသပ်သုံးစွဲ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
အရင်လို ကိုယ့်ဆိုင်က ရရှိနိုင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို စာရင်းစာအုပ်ကြီးတွေနဲ့ တကူးတက မှတ်နေစရာ မလိုပဲ ဖုန်းလေးထဲမှာပဲ စာရင်းသွင်းထားလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်ပစ္စည်းကတော့ ဈေးဘယ်လောက်၊ ဘယ်ပစ္စည်းကတော့ ကိုယ့်ဆိုင်မှာ ရှိတယ်စတာတွေကို ဖုန်းလေးနဲ့ပဲ မှတ်ထားတော့ ဈေးဝယ်သူတွေ လာဝယ်လို့ ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်း စာရင်းစာအုပ်ကြီးနဲ့ တကူးတက လိုက်ရှာနေစရာ မလိုတော့ဖူးပေါ့။
အခုလက်ရှိ E-ဘောင်ချာ သုံးစွဲသူတစ်ယောက် အများဆုံး ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းအရေအတွက်က အခု ၃၀၀ ဖြစ်ပြီး အဲ့ထပ်လည်း ပိုထည့်လို့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ E-ဘောင်ချာက ဗမာစာကိုသာ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ လူငယ်တွေသာမက နည်းပညာနဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ လူကြီးတွေပါ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သမာရိုးကျ စာအုပ်နဲ့ဘောပင်သုံးပြီး ဘောင်ချာဖြတ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဖုန်းလေးနဲ့ ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ လူကုန် သက်သာပါတယ်။ ဈေးဝယ်သူတွေ လာဝယ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဘောင်ချာဖြတ်တာကို အကြာကြီး စောင့်နေရတာမျိုး၊ ဘောင်ချာဖြတ်ဖို့ပဲ သီးသန့် ဝန်ထမ်းထပ်ခေါ်ရတာမျိုး မလိုအပ်တော့ဖူးပေါ့။
ကိုယ့်ဆိုင်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ရောင်းခဲ့တဲ့ ဘောင်ချာတွေကို ရက်စွဲတွေအလိုက် ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘောင်ချာအဟောင်းတွေကို ဖုန်းလေးနဲ့ပဲ ကြည့်လို့ ရတော့ ဒီနေ့တော့ ဘယ်လောက်ဖိုး ရောင်းရတယ်။ ဘာပစ္စည်းတွေ ရောင်းရတယ်ဆိုပြီး အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ E-ဘောင်ချာက မည်သည့် ဖုန်း၊ မည်သည့်တက်ဘလက်မှာမဆို အသုံးပြုလို့ ရတာမို့ ကွန်ပျူတာလို တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းတွေ ထပ်ဝယ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဖုန်းလေးနဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး သုံးရုံပါပဲ။
E-ဘောင်ချာနဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ ပရင်တာအမျိုးအစား နှစ်ခုရှိပါတယ်။ E-ဘောင်ချာက ပရင်တာတွေဟာ အင်တာနက် မလိုအပ်ပဲ ဖုန်းမှာရှိတဲ့ ဘလူးတုလေးနဲ့ပဲ ချိတ်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတစ်ခုကတော့ အထိုင်ပရင်တာ၃ သိန်းကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ မီးထိုးထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ၃လက်မအရွယ် ဘောင်ချာစာရွက်လေးတွေ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး မင်ထည့်ရန် မလိုအပ်ပါဖူး။ စက်က အလိုအလျောက် ဘောင်ချာစက္ကူကို ဖြတ်ပေးပြီး လူက ဘောင်ချာစက္ကူကို ဖြတ်စရာ မလိုပါဖူး။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ခါးချိတ်ပရင်တာလေးပါ။ ၃ သိန်းကျပ်ာဖြစ်ပြီး ဘတ်ထရီနဲ့မို့ သွားလေရာ သယ်သွားလို့ ရပါတယ်။ ၃လက်မအရွယ် ဘောင်ချာစာရွက်လေးတွေ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး မင်ထည့်ရန် မလိုအပ်ပါဖူး။ ဒီစက်လေးကတော့ ဘောင်ချာစက္ကူကို လူက ဖြတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့.... ပရင်တာကိုလည်း ကျနော်တို့ 09444457088 ဆီမှာပဲ မှာလို့ ရပါတယ်။
Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,com.mmblur.apk Was Risky.Detected 1 From 55 Scan.
Contained Files By Type:MF:1,RSA:1,SF:1,dex:1,gif:1,gz:1,png:813,ttf:8,xml:149,
E - Voucher က အခုဘာဝနျဆောငျမှုမှ မပေးတော့ဘူးလား? ဝယျထားတဲ့ Customer တှကေို လုံးဝဂရုကိုမစိုကျတော့ဘူး။ အဲတော့ ကြုပျတို့က Printer ကို ဘာဆကျလုပျရမှာလဲ? အမှိုကျပုံးထဲ လှငျ့ပဈရတော့မှာလား? ခငျဗြားတို့စီးပှားရေးလုပျတာ Customer တှကေိုအခုလို လဈြလြူရှုလိုကျတာ အဓိပ်ပာယျကိုမရှိဘူး။ Covid စဖွဈတုနျးကတော့ ဝနျဆောငျမှုရပျလိုကျတာကို နားလညျပေးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Online ပျေါကနပွေီးတော့ Customer care လုပျလို့ရပါတယျ။ အခုဟာက လုံးဝကိုလှညျ့မကွညျ့တော့တာ။ Customer တှဘေကျကို ခငျဗြားတို့ တဈခုခုတော့ ဖွရှေငျးပေးဦးနျော။
Kyaw Thura Ko Ko
Logn in တောငျ ဝငျမရဘူး။ Register လဲ လုပျမရဘူး။ ဘာမှ သုံးမရဘူး။ တျောတျော အဆငျမပွတော ။